Garoonka Diyaaradaha Magaalada Beledweyne oo la xiray | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Garoonka Diyaaradaha Magaalada Beledweyne oo la xiray
Wararka ka soo baxaya magaalada Baladweyne Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta la xiray Garoobka magaaladaasi,
Amarka lagu xiray ayaa yimid kadib markii Talaadadii lasoo dhaafay garoonka magaalada Beledweyne ay ku burburtay Diyaarad raashin u wadday ciidamada AMISOM xilli ay doonaysay in ay ku degto garoonka.
Ma jirin khasaaro nafeed oo ka dhashay bur burka diyaaraddaas oo gebi ahaanba dabkii ka kacay ku bas beeshay,waxaana lagasoo badbaadiyay 3-ruux oo saarnaa oo lab aka mid ah ay ahaayeen duuliye iyo caawiyihiis.
Wixii xilligaas ka dambeeyay waxaa bilowday baaritaano kala duwan oo ku aaddan waxa sababay shilkaas diyaaradeed,waxaana warar soo baxay ay sheegayeen in sabab ay u aheyd dhabaha ay ku ordain diyaaradaha oo Dameer uu soo galay xilli diyaaraddu ay cagaha la baxday damacdayna in ay degato markii duuliyihu ka leexiyay Dameerkaasna ay diyaaradda dab kla akacay.
Masuuliyiin ka tirsan wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda Soomaaliya oo ugu horeeyo agaasimaha duulista ra’yidka ayaa la sheegay in ay amar ku bixiyeen in si KMG ah loo xiro garoonka diyaaradaha magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan.
Maqaal horeSheekh Shariif & Xasan Sheekh iyo Farmaajo oo ka qeyb-galay Salaada Janaasada ee RW ee Somalia
Maqaal XigaMadaxweyne Deni oo garoowe ku soo dhaweeyey RW Kheyre iyo wefdi uu hogaaminayey